DADABE RAFARALAHIMANITRA SY RAVAOSEHENO
FIANAKAVIANA AO ANOSILAVA
Tantara sy fiaviana
NY FIHAVIAN'I RAINILEZAFY
NY ZANAK'I RAINILEZAFY
RAVOLAMISA SY ANDRIAMAROAHINA
IREO TARANAK'I RASALAMA
I RAVONINJATOVO - Ny Fahazazan
I RAVONINJATOVO - izy sy ny as
RAVONINJATOVO sy ny asam-panja
Zanaka faralahin-Rainilezafy izy. Teraka tokony ho tamin'i taona 1825 ary dia maty izy ny taona 1924. Mahay asa tanana izy, mpanao vato, manao fasana. Ao ambony avaratr’Ambohitrafaka, atsimon’Amparihy, misy vato mitondra ny anarany, Ambatondrafaralahimanitra. Izy no nanao ny fasana ao avara-trano ao Anosilava, fanaovana madio ivelany no nataon'ny taranany tamin'ny taona 1977-1978. Rabodovao no vadiny. Tsy niteraka izy.
Lehilahy tia Havana izy. Voatsidiny sy voavanginy avokoa ireo mpiray tampo aminy na dia lavitra aza. Henony fa marary Rainikotolahy dia namangy azy izy. Niverina fanindroany izy, mbola marary Ingahibe. Nanafatra I Rainikotolahy : “Voa mafy aho lehiroa a! Koa raha sanatria tsy voatsipako ity aretina ity, dia io Ravao (Ravaoseheno), ento izy hitondra loloha, fa aza avela eto”. Dia nody Rafalahimanitra rehefa nahazo ny hafatra. Tsy naharitra ela taorian’izay, nodimandry Rainikotolahy. Rehefa nangatsiatsiaka ny fahoriana dia tonga Rafaralahimanitra naka an-dRavaoseheno araka ny hafatry ny Razana. Dia tonga teto Anosilava nirafy tamin-Rabodovao. Dia nitoe-jaza, dia niteraka an’i Maharitra (Ravoninjatovo io), dia niteraka koa an-dRanjanahary Anjazamadinika (Marofangady, izay efa voalazatsika teo ambony miaraka amin'ny filazana mikasika an'i Rasalama). Mianadahy izany no zanaky Rafaralahimanitra sy Ravaoseheno.
Manaraka izany, tsara ihany ny mampahafanatra antsika fa i Rafaralahimanitra dia iray amin'ireo olona niasa nanao ny trano Fiangoanana FJKM Jerosalema vaovao tany am-piandohana. Anisan'ny asa nosahaniny tamin'izany dia nandeha tany Ankaratra tany an'ala lavitra tany, nikapa sy nitaona ireo andry hazo rehetra amin'ny valin-drihana mbola hitantsika ankehitriny. Marihina fa dia asa be tokoa ny naka sy nitaona ireny tamin'izany, satria na ny sarety aza dia tsy mbola nisy akory fa dia ny Kristiana no misalahy amin'ny fitaomana izany.